हेर्नुहोस ज्येष्ठ २ गते सोमबार मे १६ तारीखको राशिफल, पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन् ! – Karnalikhabar
हेर्नुहोस ज्येष्ठ २ गते सोमबार मे १६ तारीखको राशिफल, पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन् !
आज श्री शाके १९४४ बि.स.२०७९ ज्येष्ठ २ गते सोमबार इश्वी सन २०२२ मे १६ तारीख बैशाख शुक्ल पक्ष पुर्णिमा तिथी विशाखा नक्षत्र वरियान योग वालव करण चन्द्रमा तुला राशिमा प्रातः ०८ः३४ बजे सम्म पश्चात वृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा मित्र योग नल नाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु, चण्डीपूर्णिमा , गौतमवुद्ध जयन्ती , बैशाखस्नान समाप्ति , घाँटुनृत्य विसर्जन, उभौलीपर्व , वन्दिकापुरमा चण्डेश्वरीरथयात्रा, गोरखनाथजयन्ती ,स्वायापुन्हि रानिकोट श्रीवाघभैरव पर्व, ल.पु. गोटिखेलमा वैतरणीधामस्नान (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)।
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) प्रेमी प्रेमिकाको बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय को क्षेत्रमा मध्यम दिन रहेको छ । तपाईले कसैमाथी गरेको बिश्वासमा बिश्वसघात हुन सक्छ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम र समय ब्यतित हुन सक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । बौधिक क्षेत्रको बिकाशले तपाईको मान सम्मानमा बृद्यि गर्नेछ । कार्य क्षेत्रको गडबढीले गर्दा मनमा सामान्य डरको बास रहनेछ । बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) मित्रहरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तित्वहरुबाट धोकाहुनसक्नेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बाणीका कारण आफन्त जनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) साधारण चोट पटक लाग्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ । साजेदारी काममा हात नहालेकै बेस हुने छ । मनमा आट र शाहस को कमिले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यहोर्नु पर्ला । जिवन साथिको साथ सहयोग द्वारा ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) मनोबिलासिताका सामानहरुमा सामान्य खर्चहुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । कार्यसम्पादनमा झन्झट हुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्यकार्यमा बिशेष सजग रहनु होला ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । नयाँ मित्र सगँको भेट वा प्रिय खबरले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको सानो कमजोरीको फाईदा अरुले लिन सक्ने छन । रचनात्मक कार्य तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानीका दीर्घकालिन श्रोतहरु फेला पर्नेछन ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) पारीवारिक सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । आफ्नो कुसलताले गर्दा आम्दानिको क्षेत्र सबल रहने छ । आफन्त जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पुग्नेछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि उत्तम साबित रहनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । यात्रा सामान्य झन्झटमय रहन सक्नेछ । नयाँ मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मान्य जनको साथ सहयोग पुर्ण रुपमा प्राप्त नहुनाले मनमा खिन्नता बोध हुनेछ । शारीरिक आलस्यातले गर्दा गरीरहेको काम को क्षेत्रमा अपजस सहनु पर्ला । भोज भतेरजन्य कार्यमा सहभागीताको समय रहेकोछ । बिश्वासिला ब्यतिहरुबाट सामान्य धोका हुन सक्नेछ ।
अघिल्लो - केशव स्थापित भन्छन्- लेखेर राख्नुस् जित्ने मैले नै हो, बालेन तेस्रो हुन्छ
हेर्नुहोस ज्येष्ठ ३ गते मंगलबार मे १७ तारीखको राशिफल, पाथिभरा माताले सबैको कल्याण गरुन - पछिल्लो